Election News | Page 48 | The Ladies
Home » News » Election News
ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုများကို ဗိုလ်စိန် မှန်ကွင်းနေရာအစား ကျိုက္ကဆံကွင်း ဟစ်တိုင်ကွင်းနေရာတွင် ဆောင်ရွက်စေခဲ့ဟုဆို
Read more about ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုများကို ဗိုလ်စိန် မှန်ကွင်းနေရာအစား ကျိုက္ကဆံကွင်း ဟစ်တိုင်ကွင်းနေရာတွင် ဆောင်ရွက်စေခဲ့ဟုဆို
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဘတ်ဂျက် ၄၂၄ ဘီလီယံထဲမှ ကျပ်သန်း ၄၂၅၀ ကို ခေါင်းစဉ်ပြောင်းလဲသုံးစွဲမည်
Read more about ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဘတ်ဂျက် ၄၂၄ ဘီလီယံထဲမှ ကျပ်သန်း ၄၂၅၀ ကို ခေါင်းစဉ်ပြောင်းလဲသုံးစွဲမည်
ယစ်မျိုးရောင်းချခွင့် ထောက်ခံချက်ဖြင့် ရောင်းချခြင်းသည် တရားဝင် လိုင်စင်ဖြင့် ရောင်းချခြင်း မဟုတ်သည့် အတွက် ဖမ်းဆီးခြင်းဖြစ်
Read more about ယစ်မျိုးရောင်းချခွင့် ထောက်ခံချက်ဖြင့် ရောင်းချခြင်းသည် တရားဝင် လိုင်စင်ဖြင့် ရောင်းချခြင်း မဟုတ်သည့် အတွက် ဖမ်းဆီးခြင်းဖြစ်
ဥပဒေနှင့်မညီသည့် မေးခွန်းများမပို့ရန် မေတ္တာရပ်ခံ ကြောင်း ၀န်ကြီးဦးဇော်အေးမောင်ပြောကြား ဥပဒေနှင့်ညီမညီဆိုသည်ကို လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ကိုယ်တိုင်စိစစ်ပြီးမှ သက်ဆိုင်ရာ ၀န်ကြီးဌာနသို့မေးခွန်းပို့ရခြင်းဖြစ်
Read more about ဥပဒေနှင့်မညီသည့် မေးခွန်းများမပို့ရန် မေတ္တာရပ်ခံ ကြောင်း ၀န်ကြီးဦးဇော်အေးမောင်ပြောကြား ဥပဒေနှင့်ညီမညီဆိုသည်ကို လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ကိုယ်တိုင်စိစစ်ပြီးမှ သက်ဆိုင်ရာ ၀န်ကြီးဌာနသို့မေးခွန်းပို့ရခြင်းဖြစ်
နိုင်ငံသားများ၏ ထိခိုက်နစ်နာမှုများကို ကာကွယ်ပေးလိုခြင်းကြောင့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ခြင်းဖြစ်၊ တပ်တွင်း မဲဆွယ်စည်းရုံးမှု မလုပ်ဆောင်နိုင်သည်မှအပ ဖိအားမခံစားရဟု မုံရွာ NLD ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးညွန့်အောင် ပြော
Read more about နိုင်ငံသားများ၏ ထိခိုက်နစ်နာမှုများကို ကာကွယ်ပေးလိုခြင်းကြောင့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ခြင်းဖြစ်၊ တပ်တွင်း မဲဆွယ်စည်းရုံးမှု မလုပ်ဆောင်နိုင်သည်မှအပ ဖိအားမခံစားရဟု မုံရွာ NLD ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးညွန့်အောင် ပြော
ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ တစ်သန်းကျော်ရှိပြီး ကြိုတင်မဲပေးသူ ၈၂၉ ဦးသာရှိ
Read more about ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ တစ်သန်းကျော်ရှိပြီး ကြိုတင်မဲပေးသူ ၈၂၉ ဦးသာရှိ
သီလဝါ- ပဲခူး အဆင့်မြင့်လမ်းမ မကြာမီ ဖောက်လုပ်မည်
Read more about သီလဝါ- ပဲခူး အဆင့်မြင့်လမ်းမ မကြာမီ ဖောက်လုပ်မည်
မွန်ပြည်နယ် လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ကို တာဝန်မှ ရုပ်သိမ်းရန် စီစဉ်မှုများ ရှိနေကြောင်း သတင်းများထွက်ပေါ်
Read more about မွန်ပြည်နယ် လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ကို တာဝန်မှ ရုပ်သိမ်းရန် စီစဉ်မှုများ ရှိနေကြောင်း သတင်းများထွက်ပေါ်
ရန်ကုန်မြို့သစ် စီမံကိန်းတွင် ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးကို အစိုးရဘက်တွင် ထည့်သွင်းခြင်းသည် သဘာဝ မကျခြင်းကြောင့် လွှတ်တော်ကန့်ကွက် . “အစိုးရက စီးပွားရေးမလုပ်တတ်ရင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာ ၀င်ရောက်မလုပ်ကိုင် ပါနဲ့ ဆုံးရှုံးသွားရင် ဒါပြည်သူ့ငွေတွေပါ” ဟု ဒေါ်စန္ဒ
Read more about ရန်ကုန်မြို့သစ် စီမံကိန်းတွင် ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးကို အစိုးရဘက်တွင် ထည့်သွင်းခြင်းသည် သဘာဝ မကျခြင်းကြောင့် လွှတ်တော်ကန့်ကွက် . “အစိုးရက စီးပွားရေးမလုပ်တတ်ရင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာ ၀င်ရောက်မလုပ်ကိုင် ပါနဲ့ ဆုံးရှုံးသွားရင် ဒါပြည်သူ့ငွေတွေပါ” ဟု ဒေါ်စန္ဒ
အမျိုးသားတန်းတူရေးဆိုသည်မှာ ဗမာက သမ္မတဖြစ်ခွင့် ရှိသလို ယင်းအခွင့်ရေးမျိုး ရှမ်းမှာလည်း ရှိရမည်ဟု SNLD ပြောကြား
Read more about အမျိုးသားတန်းတူရေးဆိုသည်မှာ ဗမာက သမ္မတဖြစ်ခွင့် ရှိသလို ယင်းအခွင့်ရေးမျိုး ရှမ်းမှာလည်း ရှိရမည်ဟု SNLD ပြောကြား